I-AU yeseka uDlamini-Zuma kwesokuba ngumengameli | News24
I-AU yeseka uDlamini-Zuma kwesokuba ngumengameli
Addis Ababa – Abaholi be-African Union Commission (AU) sebevalelise obenguSihlalo wayo, uNkosazana Dlamini-Zuma, ngokuthi bamesekele ukuthi adle umhlanganiso ukuze agcine esenguMengameli olandelayo waseNingizimu Afrika.
Enkulumweni yakhe yokuvala ukuvezile ukuthi ufuna ukuqhubeka nomsebenzii wakhe ezwenikazi i-Afrika, wathi “uzoqhubeka nokuba yisosha elilwela izinhloso zase-Afrika”.
OLUNYE UDABA: ‘Umengameli Zuma ufuna ukufaka uDlamini-Zuma kwesikaGordhan’
Ihlandla likaDlamini-Zuma njengoSihlalo we-AU Commission liphele engqungqutheleni ye-AU ephothulwe ngoLwesibili njengoba uNgqongqoshe wezangaPhandle eChad , uMoussa Faki Mahamat, eqokwe ukuba athathe izintambo kuyena.
UMengameli waseGhana, uNana Akufo-Addo, ubonge kakhulu uDlamini-Zuma ngomsebenzi awenzele abesifazane, wabe esethi angaba (uDlamini-Zuma) uMengameli wesibili wesifazane e-Afrika uma iNingizimu Afrika imvotela.
Ngaphezu kwalokho noMengameli weseGuinea, u-Alpha Conde naye ugcizelele ukuthi uDlamini-Zuma angaba umengameli olandelayo wakuleli.
UDlamini-Zuma naye uncome ngokukhethekile uMengameli waseLiberia osephuma, u-Ellen Johnson-Sirleaf, ngokuba uMengameli wokuqala wesifazane ongene ngevoti e-Afrika.